Beddelka ugu Wanaagsan ee ereyga loogu talagalay iPad | Applelised | Waxaan ka socdaa mac
Beddelka ugu fiican ee loogu talagalay Word for iPad
Applelised | | Noticias, Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac
Imaanshada Xafiiska ipad Waxay ahayd mid niyad jab leh sidii la filayay iyo goor dambe. Iyada oo la adeegsanayo naqshad iyo waxqabad dhab ah, Word, Excel iyo PowerPoint ee iPad-ka wax noogu adeegaya ma ahan in aan boos ka helno iPad-ka oo aan la tashanno dukumiintiyada, waana wax aan ku qaban karno barnaamijyo kale oo badan Haddii aan dooneyno inaan abuurno ama wax ka bedelno waa inaan dhex marnaa sanduuqa oo aan ku qornaa, taas oo xitaa ka sii liidata suuqyada tartanka uu ku doortay bilaash. Haddii tpco-gaagu ay diyaar u yihiin inay bixiyaan si ay u sameeyaan waxa dadka kale kuugu deeqaan bilaash ama, ugu yaraan, iyadoon lahayn rukhsado weligeed ah, maanta waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah beddellada ugu fiican ee loo yaqaan 'Word for iPad'. Iskuday oo go'aanso.
1 Bogagga Apple
2 Dukumiintiyada Google
4 Xafiiska Polaris
5 Xafiiska Smart 2
6 Beddelka kale ee loo yaqaan 'Word for iPad'
Haddii aan ka hadalno iPad-ka iyo Apple, bedelka ugu fiican Erayga iPad-ka es Bogagga, qaasatan hadii shaqadeena oo dhan lagaqabto hareeraha guriga. Faylkeedu si fiican ayey ula jaan qaadayaan Ereyga, wax soo saar iyo wax soo saar labadaba sidoo kale waa bilaash waqtiga aad iibsato qalab cusub.
Laakiin haddii aan ku horumarinno shaqadeenna si aan kala sooc lahayn iPad, PC, Mac ... malaha xulashooyinka kale ayaa si isku mid ah u xiiso badan.
Dukumiintiyada Google waa bedelka ugu fiican ee Erayga iPad-ka haddii aan ka wada shaqeyno Mac iyo PC. Dabeecaddiisa qaab-dhismeedka badan, oo ay ku kaabayaan Drive iyo shaqooyin badan oo kala duwan, waxay ka dhigayaan qalab ku habboon shaqada iskaashiga. Sidoo kale, macno malahan hadaadan haysan qadka internet-ka xilligan, waad kusii wadan kartaa inaad si isku mid ah ushaqeyso isla markaana daruurtu shaqadeeda qabato marka xiriirku soo laabto.
Beddelka kale ee weyn ee Erayga iPad-ka es CloudOn. Gebi ahaanba bilaash ah, waxay ku siineysaa dhammaan astaamaha Xafiiska iyo iswaafajinta adeegyada ugu muhiimsan ee daruuraha, in kastoo, haa, waxay muhiim u noqon doontaa inaad xiriir internet leedahay.
Ikhtiyaar kale oo ah Erayga iPad-ka iyo, guud ahaan, xafiis kasta oo ka tirsan xafiiska. Ka taagan yahay Xafiiska Polaris helitaankeeda degdegga ah ee lifaaqyada emaylka, keydinta daruuraha isku dhafan iyo maareynta dukumintiyada.
Xafiiska Smart 2
Abuur, wax ka beddel oo la wadaag dukumiintiyada barnaamijkan wax soo saar oo ay ku jiraan a noocyo badan oo noocyo iyo qaabab ah, oo lagu daray awoodda lagu dhoofin karo feylasha sida PDF oo lagu keydin karo DropBox ama Google Drive. In kasta oo aysan lacag la'aan ahayn, qiimaheeda iyo, gaar ahaan, in aysan rukumo ahayn, waxay ka dhigeysaa beddel wanaagsan Erayga iPad-ka
Beddelka kale ee loo yaqaan 'Word for iPad'
Laakiin App Store waxaan ka heli karnaa waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo Erayga iPad-ka iyo, guud ahaan, dhammaan xafiiska xafiiska. Su’aashu waxay tahay inaan isku dayno oo aan aragno midkee ku habboon baahiyahayaga. Qaar kale waa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Beddelka ugu fiican ee loogu talagalay Word for iPad
Diiwaan Geliyaha Iris, ku duub wax kasta oo ka dhaca shaashadda
Socod ku maray taariikhda astaanta Apple